Fanatanterahana ny vinan’ny filoha: 7 000 mahery ireo nitady asa, 460 ireo miketrika seza ho minisitra | NewsMada
Fanatanterahana ny vinan’ny filoha: 7 000 mahery ireo nitady asa, 460 ireo miketrika seza ho minisitra
Par Taratra sur 29/01/2020
Nifarana ny 24 janoary teo ny fandraisana ny antontan-taratasy ho an’ireo manampahaizana, liana hiara-kiasa amin’ny fitondrana, ho amin’ny fanatanterahana ny vinan’ny filoham-pirenena. 7 855 ireo nametraka izany sy namaly ny tolotrasa ka nizara sokajy maromaro. Mbola handalo sivana izy ireo…
Navoakan’ny eo anivon’ny fiadidina ny Repoblika, tamin’ny alalan’ny tale kabinetra, Ranoromaro Lova Hasinirina, tetsy Ambohitsorohitra, omaly, ny momba ny antontanisa ho an’ireo nametraka ny mombamomba azy (CV) ao amin’ny tranonkalan’ny primatiora. Anisan’ny miavaka ao anatin’izany ny fahamaroan’ireo miketrika ho lasa minisitra. Miisa 460 izany (5%) raha 243 ireo mitady ny toeran’ny governora. Maro anisa kokoa anefa raha mitaha amin’ireo ny te ho tale. Miisa 1 642 izy ireo raha 779 kosa ireo maniry ho lasa tale jeneraly. 97 kosa ireo te ho ambasadaoro. 231 ireo maniry ho lasa sekretera jeneraly.
Na izany aza anefa, marobe ireo manampahaizana nandefa CV amin’ny sehatry ny fitantanana orinasa. Tafakatra hatrany 2 023 izany (25%). Manaraka ireo maniry hiasa eo sehatry ny fanabeazana, miisa 1 769 (22%) raha mifanahantsahana samy eo amin’ny 18% eo kosa ireo maniry hiasa eo amin’ny lafiny sosialy sy ny fifandraisana ary ny serasera.
Manampahaizana Tim sy HVM
Manaraka avy eo ireo maniry ho eo anivon’ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny fikarohana ary ny fampandrosoana, samy 17%. 13% kosa ireo manampahaizana hitodika kokoa any amin’ny sehatry ny fambolena raha 12% ny mirona any amin’ny varotra. Eo amin’ny 8% kosa ireo maniry hiasa eo amin’ny tontolon’ny herinaratra sy ny angovo nohavaozina. 7% eo amin’ny fahasalamana. Eo amin’ny 5% ireo hisehatra amin’ny harena an-kibon’ny tany raha 4% eo amin’ny tontolon’ny kolontsaina. Anisan’ny vitsy indrindra kosa ireo maniry hiasa eo amin’ny solika sy ny fitsaboana, 3 sy 2% izany. Nandefa CV maromaro koa ny olon’ny filoha teo aloha isany, Ravalomanana, mpanorina ny Tim sy Rajaonarimampianina, mpitarika ny HVM.
Lavitry ny kolikoly…
Nampahatsiahy ny anton’izao tolotrasa izao ny eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika ka nilaza fa tafiditra amin’ny fanatanterahana ny vinan’ny filoha izany ho fanatsarana sy ho fanavaozana ny fomba fitantanana ny andrimpanjakana. “Natao koa izany hisorohana ny kolikoly sy ny kiantranoantrano. Nanaovana antso avo manerana ny Nosy sy ny Malagasy any ivelany. Ahafahanana manana tahirin-kevitra azo hakana ireo manana traikefa sy fahaiza-manao izao”, hoy izy.
Hody an-tanindrazana ireo zanaka am-pielezana
Nahatonga CV ny Malagasy avy any Eoropa, avy any Etazonia, avy any Kanada, vonona hody an-tanindrazana. Horaisin’ny komity manokana iraisam-pirenena avy any Kanada miaraka amin’ny Malagasy ireo CV ireo. “Hifantina ireo nahafeno ny fepetra sy ny mason-tsivana izy ireo. Hojerena avy eo ireo mila mpiasa: fiadidiana ny Repbolika, minisitera, faritra, masoivoho… Mamaly ny filana eo amin’ny ireo sehatra rehetra ireo voafantina eo”, hoy ihany izy.